Blog Reader: Nov 19, 2008
[Pan Pwint Lay - My Diary] 1 New Entry: Arashi
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://panpwintlay.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[ဒေါင်းမာန်ဟုန်] 1 New Entry: ဗမာပြည်မှ အာဇာနည်များ
[ကိုတိုးလေး..............] 1 New Entry: သစ်ပင်
[ညီလင်းသစ်] 1 New Entry: Autumn
[အတွေးရပ်ဝန်း] 1 New Entry: လက်ဆောင်
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခင်မင်ရင်းနှီးလာပြီဆိုရင် လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးလေ့ပေးထ ရှိကြပါတယ်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်တို့၊ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်တို့လို အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုခုအတွက် ပေးကြတာမျိုးရှိသလို ခရီးတစ်ခုခုကနေ ပြန်လာတဲ့အခါ အမှတ်တရအနေနဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ ၀ယ်လာပြီးတော့လဲ ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘဲ ခင်လို့မင်လို့ ပေးကြတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဆောင်ရတယ်ဆို ပျော်ကြတဲ့သူချည်းပါပဲ။
ကျွန်မကတော့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးရင် စာအုပ်လေးတွေ ပေးတတ်ပါတယ်။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့သူဆိုတော့ သူများကို လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင် စာအုပ်ကလွဲပြီး ဘာမှ သိပ်စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကို ဖတ်မိရင် နှစ်အုပ်၊ သုံးအုပ်လောက် ပိုဝယ်ထားတတ်တာလဲ ကျွန်မအကျင့်ပါပဲ။ သူများက ကိုယ့်ကို လက်ဆောင်ပေးရင်တော့ ဘာလေးပဲရရ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို သတိတရနဲ့ အမှတ်ရပေးတဲ့အတွက် ကြည်နူးပီတိဖြစ်ပြီး ပျော်တာမျိုးပါ။ အခုလို အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ အွန်လိုင်းကနေ ကိုယ်ခင်တဲ့သူတစ်ယောက်က မေးလ်လေးတစ်စောင်လောက်(တိုတိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်) ပို့လိုက်တာမျိုး၊ E-card လေးတစ်ခုလောက် ပို့ပေးတာမျိုးဆိုရင်လဲ ကိုယ့်အပေါ်မှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့ အမှတ်တရရှိမှုအတွက် စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်ပြီး ပျော်မိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်လဲ Christmas တို့၊ New Year တို့လိုမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့လိုမျိုးဆိုရင် အမှတ်တရ ကဒ်လေးတွေ ပို့ပေးတတ်ပါတယ်။ ပြောမနာ ဆိုမနာ ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆို ကျွန်မကို "နင်က အင်တာနက်ဆိုင်မှာ လုပ်နေတိုင်း အလကားရတဲ့ E-card တွေချည်းပဲ ပို့ပေးနေတယ်" တဲ့။
သူပြောသလို E-card ဆိုတာ အလကားရတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကဒ်ကို ပို့ပေးတဲ့သူရဲ့ရင်ထဲက သံယောဇဉ်နဲ့ အမှတ်ရမှုကတော့ တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေအတွက် အလကားတော့ မဖြစ်လောက်ဘူးလို့ ကျွန်မ ယုံပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ အပြုအမူတိုင်းကို အပေါ်ယံမကြည့်ဘဲ တန်ဖိုးထားတတ်တာကြောင့်ပါ။
ဒီနှစ်ထဲမှာ ကျွန်မအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ ရ,ထားတာရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်လောက်က အွန်လိုင်းမှာ ကျွန်မ အရမ်းခင်ရတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ဆီကနေ လက်ဆောင်တစ်ခု ရလိုက်ပါတယ်။ လူကြုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ DVD လေးတစ်ချပ်ပါ။ ရပ်ဝေးမြေခြားကနေ သတိတရနဲ့ တကူးတက ထည့်ပေးလိုက်တာရယ်၊ လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားတာရယ်ကြောင့် အဲဒီ DVD လေး ကျွန်မလက်ထဲ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြောမပြတတ်အောင်ကို ပျော်မိပါတယ်။ အဲဒီအစ်မရဲ့ ကျွန်မအပေါ်မှာ ထားတဲ့ သံယောဇဉ်ကိုလဲ ရင်ထဲမှာ တကယ့်ကို အမှတ်တရနဲ့ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
နောက်ထပ်ရ,ထားတဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်ဆိုတာကတော့ သီချင်းလေးတွေပါ။ စာအုပ်တွေကို ချစ်သလို ဂီတသံစဉ်လေးတွေကိုလဲ မြတ်နိုးတဲ့ ကျွန်မအတွက် သီချင်းအပုဒ်ရေပေါင်း များစွာကို လက်ဆောင်ရတာဟာ တကယ့်ကို ပျော်စရာလေးပါပဲ။ တစ်နေ့တာလုံး အလုပ်ခွင်မှာ အာရုံစိုက်ထားရသမျှ ညအချိန်မှာ သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ပြီး အနားယူလိုက်ရရင်ပဲ ပင်ပန်းမှုတွေ ပြေပျောက်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သီချင်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုလဲ ပြောမပြတတ်အောင် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒီလို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်လဲ ကျေနပ်စိတ်နဲ့အတူ ပိုပြီး ခင်တွယ်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ခင်တွယ်ကျေနပ်နေတဲ့သူအဖို့ ဘ၀ဟာ နေပျော်ချင်စရာပါပဲ။
သက်မဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကနေ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြည်နူးပီတိဖြစ်မှုကို ရရှိခံစားစေတဲ့အတွက် ကျွန်မကတော့ လက်ဆောင်လေးတွေမှန်သမျှကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးနေမှာပါ။ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်မခင်တဲ့သူတွေကိုလဲ အွန်လိုင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြင်ပလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအလျောက် အမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးပေးသွားဖို့လဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
တကယ်တော့ လက်ဆောင်ဆိုတာ တန်ဖိုးနည်းသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို ကြည်နူးမှုပေးနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။
[ညီနေမင်း] 1 New Entry: mobile ကနေ ကွန်ပျူတာကို free call ခေါ်နိုင်ပြီနော် ...
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://nyinaymin.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ]2New Entries: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၈-၁၁-၀၈)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၈-၁၁-၀၈)
- မတရားသော အမိန့်အာဏာဟူသမျှကို ဆန့်ကျင်ရန် MPU တိုက်တွန်း click
- တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်၏ သားကို ထောင်ဒဏ် (၃၃) နှစ် ချမှတ် click
- ၀ါရင့်နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ အမျိုးသားနေ့အောင်ပွဲ ကျင်းပမည် click
- အမေရိကန်ကျောက်မျက်ဥပဒေကြောင့် ကျောက်ကုန်သည်ကြီးများပါ ထိခိုက်နိုင် click
- စားအုန်းဆီမှ ဦးပိုင် အမြတ်အစွန်းများစွာ ရနေ click
- လက်ဝေခံတို့ ပေါင်းစားကြပြန်ပြီ (ဆောင်းပါး) click
- စီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့် စင်ကာပူရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဒုက္ခတွေ့နေ click
- အရှင်ဂမ္ဘီရနှင့် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအား နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ် click
- ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း စင်ကာပူတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူ click
- အတိုက်အခံများကို ထောင်ချနေမှုအပေါ် ကုလနှင့် အိမ်ဖြူတော်က ရှုတ်ချ click
- ပူးကျင့်ရှင်းထန်၏ သားဖြစ်သူ ၃၃ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ကျ click
- လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာလှအောင် ကွယ်လွန် click
- စင်္ကာပူစီးပွားရေးကျ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လွှဲပို့ငွေများ ထိခိုက် click
- သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် စွဲချက်ဖြင့် သံဃာ (၂) ပါးအား ထောင်ဒဏ်ချမှတ် click
- စစ်သင်္ဘောများ စစ်တွေတွင် ဆက်လက် ရှိနေဆဲ click
- မြန်မာစစ်အစိုးရကို နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများက ပြစ်တင်ရှုတ်ချ click
- စီရင်ချက်နှင့် ဝေးလံသော ထောင်သို့ပို့မှု မတရားဟု မိသားစုများက ရင်ဖွင့် click
- စီရင်ချက်နှင့် ထောင်ပြောင်းရွှေ့မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေ၊ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများနှင့် ကိုထင်ကျော် တို့ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ် click
- ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြား၌ စစ်တပ်က ရိုက်နှက်၍ အရပ်သား ဒဏ်ရာပြင်းစွာရ click
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာ ရေပိုင်နက်အငြင်းပွားမှု မြန်မာဘက်က လျှော့ click
- U.N. rights experts condemn Myanmar activist trials click
- CSW urges UN Secretary General to prioritise human rights in Burma click
- Burma: Forced labor used for battle preparations click
- USG Humanitarian Assistance to Burma (as of 17 Nov 2008) click
အရှေ့တောင်အာရှမှာ ... (၀တ္ထတို)
အရှေ့တောင် အာရှမှာ …
တကယ့်တကယ် ရောက်လာတော့ မလေးတရုတ်က နှစ်ယောက်၊ စင်္ကာပူတရုတ်က တယောက်၊ မလေးကု လားက တယောက် ပေါင်းလေးယောက်။ မွန်ရည်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုလည်း လေးလေးစားစားနဲ့ပါ။ ကိုယ်က လည်း သူတို့တတွေ ကြိုက်တတ်တဲ့ ပင်လယ်စာတွေ သေသေချာချာ မှာပေးလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်က တော့ ဂဏန်းပျော့ပေါ့၊ ငနဲတွေ တော်တော် သဘောကျသွားတယ်။ It'sagood food. ဆိုတာကို တွင်တွင် ကြီး ပြောနေတော့တာပါပဲ။ ကဲ အလုပ်အကြောင်း စလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ သည်လူတွေ အစားအသောက် ဘေးချ။ မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်လာကြတယ်။
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://drlunswe.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း] 1 New Entry: ငှက်ကလေး ခရီးသွား
သူ့ကို စမွေးတော့ သူ့အိမ်ရာသည် နွားစားကျက်သာသာဖြစ်သည်။ သူ့အိပ်ယာသည် နွားစားခွက်သာသာ ဖြစ်သည်။ ဒါဆို ယေရှုခရစ်လို ဖြစ်နေတာပေါ့ ဟု သူမက ပြူးပြူးပြက်ပြက် အံအားတသင့်မေးတော့ "အဲသလိုဆန်ဆန်ပါပဲ သမီးရဲ့" ဟု ခပ်တွေးတွေး ဖြေသည်။ အဖ ဦးဘအို နှင့် အမိ ဒေါ်စံထယ်တို့မှာ ရပ်ရွာသစ် ပြောင်းစ ကာလ ဖြစ်သည်။ ရေစကြို ခရိုင် မုံညင်း၊ မြေဖြူမှ တောင်သာမြို့နယ် ကန်မြဲဇဂျမ်းရွာသို့ အထုပ်အထည် သိပ်မပါ လက်ချည်းသာသာ ပြောင်းစဉ်က ဖြစ်သည်။
အထက်ပြည် အထက်ရွာ မန္တလေးအထိ၊ အောက်ပြည် အောက်ရွာ မော်လမြိုင်၊ ရွှေတိဂုံအထိ "စိန်ဗေဒါ"ဆိုင်းဝိုင်းနှင့် လိုက်သည်။ ဤတွင် ဂီတ အနုပညာနှင့် ပျော်မွေ့တော့သည်။ အထည်စီးပွားဖြစ်မဖြစ် သိပင်မသိတော့။ ဇနီး မစံထယ်နှင့် မိခင် ဖခင်ကိုပင် အမှတ်မရနိုင်တော့။
ထိုမှတဆင့် ဇနီးသည်ကို လက်ဆွဲကာ ကန်မြဲ ဇဂျမ်းသို့ အခြေချဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သားသမီး စုစုပေါင်း ဆယ်ဦးထက် မနည်း ဖွားခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံး သုံးဦးသာ အဖတ်တင်ရသည်။ အဖတ်တင်သည့် သမီးကြီးမှာ"တင်မေ" ဖြစ်လာရသည်။ ကန်မြဲမှ မွေးသူ သမီး "မမြဲ" မှာ အရွယ်မတန်ခင် ကွယ်လွန်ရသည်။ သည့်နောက် ကန်မြဲဖက် မွေးသူ ကန်မြဲဇဂျမ်းသား မောင်ဘဂျမ်းသည် "တင်မိုး" ဖြစ်ပါသည်။ နှမ အငယ်ဆုံးမှာ "မတင်စန်း" ဖြစ်သည်။
"ဖေဖေ မန္တလေး ကိုရင်လေးဘ၀ မနက်မနက် ဖိနပ်မပါ ဆွမ်းခံထွက်ရင်း တခါတရံ အမရပူရဖက်၊ အင်းဝဖက်ထိ လယ်ကန်သင်းရိုးတွေမှာ ဖြတ်လျှောက်ရင်း လောကီပညာတွေ သိပ်ဆည်းပူးချင်ခဲ့တာပဲ။ တနေ့တော့ ငါ လောကီပညာတွေ တတ်မြောက်ပြီး လောကီ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖို့ အမြဲခံစား အိပ်မက်နေခဲ့တယ် သမီးရယ်"
ဆရာတော်များအား အလွန်အမင်း ကြည်ညိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအား အင်မတန် ဦးထိပ်ထားသော်လည်း သူ၏တိုးတက်သော အမြင်က ရေစကြို "အမေတိုက်" အိမ်သို့ စွန့်စွန့်စားစား ပို့ခဲ့သည်။ ဤတွင် အဒေါ်ဖြစ်သူ အမေတိုက်၏ ဆိုင်လုပ်ငန်းများ ကူညီရင်း အတန်းကျောင်းပညာရေး စခဲ့ရသည်။
"ဖေဖေ ဆယ်တန်းအောင်တော့ အသက် ၂၄နှစ် ရှိပြီ။ ကျောင်းစတက်တုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းဘ၀ကလာတော့ အတန်းထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်နေတာ။ ငါ့သမီးက ၁၆နှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူး ဆယ်တန်းအောင်တာ ကံကောင်းပါတယ် သမီးရဲ့" ဟု အားပေးစကားများ အမှတ်ရမိပါသေးသည်။
"မနက်ခင်း ကဗျာများ" သည် လှပသည်ချည်း။ ။
ကဗျာ၏အချစ်က အချစ်ကို ကဗျာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ မန္တလေး တက္ကသိုလ် ဇာတ်လမ်းများတွင် ကဗျာသန်သူ၊ ကဗျာဆန်သူ၊ ကဗျာခင်သူ၊ ကဗျာ မင်သူ၊ ကဗျာမွေ့သူ၊ ကဗျာကို တွေ့သူ ရန်ကုန်သူ မိခင် "စန်း"နှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့ရပြီ။ ထို့နောက် "ကဗျာ မိသားစု " တည်ထောင်ကြလေသည်။
မန္တလေး စာပေလှုပ်ရှားမှုများမှ ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းလာခဲ့ရာ သူမကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမကို "သမီးက မန္တလေး သန္ဓေ၊ ရန်ကုန်မွေး" ဟုပြောပြခဲ့သည်။
သူမကတော့ သူမကိုယ်သူမ ၇လအရွယ်နှင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ရသော သူမအထက် အမ "မိုးမိုးမင်း" ၀င်စားသည်ဟု ယုံကြည်နေသည်။ ဖေဖေတို့ မေမေတို့ ဘ၀လေးထဲကို နှစ်ခါ ပြန်ဝင်လာတာ ဟု ဖခင်က အမှတ်တရ ပြောလေ့ရှိသည်။ "မင်းမင်းက သူ့အဖေ မြင်ရင် မျက်လုံးလေးတွေ ကြယ်လို ၀င်းတောက် သွားတာ။ အဖေ့လေချွန်သံကို ရှာပြီး ပြုံးပြရတာ အမော" ဟု မိဘ၏ နက်ရှိုင်းမေတ္တာကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ခံစားနေရသည်။
စံ နှင့် ချိုကတော့ သူမထက် စာဖတ်နိုင်သည်။ ကျောင်းဖွင့်ရက်၊ ကျောင်းပိတ်ရက် မရွေး အိမ်တွင် သည်းကြီး မည်းကြီး စာဖတ်ကြသည်။ ပြီး အမြင်တွေ ဖလှယ်ကြသည်။ ရွှေဥဒေါင်းများ၊ ဂျာနယ်ကျော်များ၊ ခင်နှင်းယုများ၊ စံစံက သူ့ရဲ့ ငယ်ဘ၀တခုလုံး စကားလက် အိုဟာရာက လွှမ်းမိုးနေပါသတဲ့။ "အေး"ကတော့ မဂ္ဂဇင်း ၀တ္ထုတိုများကို ပိုနှစ်ခြိုက်သည်။ "ချို"က မြန်မာစာ အရေးကောင်းသည်။ ဒါကြောင့် အယ်ဒီတာ နှင့် ၀တ္ထုရေးဆရာမလေး ဖြစ်လာသည်။ လွမ်းဆွတ်ဖွယ် "မှန်တင်ခုံပေါ်က နှင်းဆီပွင့်"။
"ဥာဏ်"ကတော့ ဟိုတအုပ်၊ သည်တအုပ်၊ ဟိုနားခွေ၊ သည်နားခွေ ဖတ်နေတာပါပဲ။ ဘာစာအုပ်တွေလဲတော့ သိပ်မသိ။
တအိမ်လုံး အကြိုက်ကတော့ မိုးမိုးအင်းလျား ဖြစ်မည်။ အမေက စ ဦးဆောင်။ "မြန်မာပြည်တွင် နေကြသည်"က အလွန် သရုပ်ပေါ်လှတဲ့ ဂန္တ၀င်အနုပညာလက်ရာ။
"ပုဂံကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံ" ကဗျာများ ၁၉၇၇ ထုတ်ကတော့ ဖခင်ရော သူမပါ အားအရဆုံး ကဗျာစာအုပ်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။ အနုပညာ၊ လူမှုရေး၊ လူသားရေးရာ အစစ စေတနာနဲ့ အရည်အသွေး ရောင်ပြန်ဟပ်နေသော ခေတ်၏ ကြေးမုံတချပ်လို့ သူမထင်သည်။ ကံကော်ရိပ်မှ အိမ်မက်များကိုလည်း အံ့သြတကြီး သူမ နှစ်ခြိုက်သည်။
ဆယ်ကျော်သက် သူမ စာလက်တဲ့စမ်းကြည့်တော့ "ရထားည" တို့ "အိမ် ဒိုင်ယာရီ" တို့ "စိတ္တဇ ပန်းချီ" တို့၊ "ပညတ်များ"တို့ "စပယ်မေမေနှင့် စကားပြောခြင်း"တို့ ထွက်လာသည်။ ဖခင် သိပ်သဘောတွေ့ပုံ မရ။ လက်တွေ့နဲ့ ဘ၀ကို ဆက်စပ်ပါ သမီးရဲ့၊ အတွေးနဲ့ ခံစားမှုတွေကို လျှော့ပါ။ လွင့်မျော မနေစေနဲ့။
ထို့နောက် ဖခင် အလုပ်ပြုတ်၊ "စာသင်ပြခြင်း" ၏ အပြစ်ဒဏ်။ အလကားပဲတင်း စေတနာ ကျောင်းဆရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျိုးပြုအပြီး ရလဒ်။
မှတ်မှတ်ရရ အဖေထောင်ကထွက်တဲ့နေ့က အဖေ့ထောင်ဝင်စာတွေ့ရသည့်နေ့။ သမီးတွေလည်း အဖေလွတ်တာတွေ့တော့ အပျော်လွန်ပြီး ပြင်ဆင်ထားသော ထောင်ဝင်စာ အထုပ်များအား ထောင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့သော ရဲဘော်များကိုပေးရန် သတိမရလိုက်ကြ။ အဖေ ငိုသည်။ "သမီးတို့ ထောင်ဝင်စာ ပို့ဖို့ မေ့သွားကြတာလား" တဲ့။ နောက်မှ ၀န်ထမ်းများနှင့် ပြန်လည် ပို့လိုက်ရသည်။
ထိုမှ သူမလဲ "ဖန်မီးအိမ်" ဆေးခန်းရှင် ဖြစ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွေ၊ ပြည်တွင်းတွေ လှည့်လည်၊ အိမ်ထောင်လဲကျ၊ ချစ်သော မြန်မာပြည် နှင့် ကဗျာ မိသားစုကလေးအား ခွဲခွာ ခဲ့ရ။ လောကကြီးမှာ အမှန်တကယ်တော့ ကဗျာထက် အရေးကြီးတာ သိပ်မရှိခဲ့။
တလောကမှ ကိုအောင်ဝန်း (နယ်သာလန်) ပြောပြမှ "ဆရာတို့က ရသ ခံစားတတ်အောင် လူတိုင်းကို သင်ပေးချင်တာ၊ ရသ ခံစားတတ်မှ လူအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိမှာ လို့ ပြောခဲ့တာ" သူ့ရင်ထဲမှာ ယနေ့အထိ စွဲခဲ့ရကြောင်း မှတ်မှတ်ရရ သိရသည်။ ဟုတ်ပါရဲ့။ ငွေကြေး၊ အာဏာ၊ ရာထူး၊ လောဘ တက်နေသရွေ့ လောကမှာ ကဗျာမဲ့၊ ရသမဲ့နေမည်လေ။
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://moechothin.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[ဟင်းလင်းပြင်] 1 New Entry: ဒီနေ့စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းနဲ့ အမေရိကန်အင်ပါယာ
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://hinlinpyin.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[တောကျောင်းဆရာရဲ့ တစ်ခါက တစ်ချို့တလေ] 1 New Entry: ပွဲတော်
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://openmind.net63.net/?feed=rss2. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[khin oo may] 1 New Entry: ADDICT
ရူံး ၉ ရက် မသွားဘဲ ဘာတွေ လုပ်သလဲမေးရင် ဘလော့လုပ်တယ်လို့ဖြေမိမယ်။ မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့လဲ လုပ်မိတာဘဲ။ စိတ်အလိုကိုလိုက်တယ် လို့ဆိုရမယ်။ ရန် ကုန် သွား တာ ထက် ပျော်မိသေး တယ် ဆိုရငfကိုယ့်ကိုရူးတယ်လို့ များထင်နေမိမယ်။
ဘာတွေစွဲလမ်းမှန်းမသိ စွဲံလမ်းမိတယ်။ အပြင်ကမိတ်ဆွေ ထက် ဘလော့ထဲက မိတ်ဆွေ ကိုပိုခင်နေမိတယ်။ တနေလုံ့း နေ လို့ အိမ်ကို ဘယ်သူ မှ မလာ။ ဘယ်သူ မှ ဖုံးမဆက်လဲ ပျင်းရိ ညည်းငွေ့တယ် ဆိုတာ မရှိ။
ဘဝတိုးတက်ဘို့ စာဖတ် ပါ ဆိုတာ လျှစ်လျူရှူထားမိတာ အတော်ကြာပြီ။ နောင်တ တွေ ရ မိ တာ အခါခါ။ hits တွေတက်လာတာ။ ကိုယ့်ရဲ့ကလစ်မှူကြောင့်ဘဲလာ။ လာ ဖတ်သူတွေ များ လာသလား ဆို တာ တော့ ကိုယ်လဲ မဝေခွဲတတ်။
ရှေ့ဆက်တော့လဲ လျှော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာကလဲခဏခဏ။ရေးချင်မိတဲ့အခါလဲ အ တော မ သတ်. ရေး လို့ မ ရ တဲ့အခါခါလည်း. ကြံလို့မှ ဘာမှ မထွက်..
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://khinoomay77.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[MANORHARY] 1 New Entry: သော့အပ်ခဲ့တယ်
ချိုသင်းက မနက်ဖြန် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်က ဆရာဦးတင်မိုး မွေးနေ့ဆိုလို့
တလောက စာအုပ်တွေစုရှင်းရင်း ကဗျာတွေစုထားတဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ
ပြန်ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဆရာ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုသတိရပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီကဗျာလေးကို ၁၉၉၀ နိုဝင်ဘာ စပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း ကကူးထားခဲ့တာပါ။
၂၆.၉.၉၀ တွင်ကွယ်လွန်သော ဆရာဇော်ဂျီသို့…………
ခု..အဲဒီသော့လေး ..ဆရာ ဘယ်သူ့တွေကိုအပ်သွားပါလိမ့်လို့လည်း စာရိုက်ရင်း
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://manorhary.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[star behind the sky] 1 New Entry:
တကယ့်ကို ပလုံဂွမ်ဆရာပါပဲ။ ကွန်ပြုတာနှင့် စထိတွေ့တော့ အများနည်းတူ MS Word၊ Excel၊ စတဲ့ အသုံးချအပြော့ထည် (Application Software) မျိုးတွေနဲ့ စခဲ့တာပဲ။ မမေ့နိုင်တဲ့ ဆရာမလေးကြောင့် ပရိုဂရမ်ဘက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ (ဆရာမလေးက ရိုးရိုးနော်။ သူများလို ချစ်သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ ချစ်လို့ လည်းမဟုတ်ဘူး။ တောင်တောင်အီအီတွေးမှာလည်း စိုးရသေးတယ်။) ဆရာမလေးက ကျွန်တော်တို့ ကို အသုံးချအပြော့ထည် သင်ပေးတဲ့ဆရာမလေးပါ။ ချောချောလေး။ (ဟိ..ဒါတော့ သိသား)။ ကျွန်တော်က လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ခိုင်းရင် လုပ်ချင်ရာလျှောက်လုပ်တော့၊ စိတ်ကူးပေါက်ရာလျှောက်လုပ်တော့ ဆရာမနဲ့ရင်းနီးနေတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ခုခုလုပ်နေရင် သူကနောက်ကနေ တိတ်တိတ်လေး လာကြည်နေတက်တယ်။ (သူတို့ ကဒီလိုပဲ တတန်းလုံးပါတ်ကြည့်နေတက်တာ)။ ဒီလိုနဲ့ရင်းနီးတော့ ဂိမ်းကစားခွင့်ပေးဖို့ဂျီကျတာပေါ့။ ၁၀တန်း ပြီးခါစဆိုတော့ လူကတဇွတ်ထိုးရယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ဂိမ်းကစားခွင့်ရတယ်။ ဂိမ်းက အခုခေတ်လိုမဟုတ်ပါဘူး။ သေးသေးလေးရယ်။ အတွက်အချက်လုပ်ပြီး ကစားရတဲ့ဂိမ်းမှာ ကျွန်တော်ကပွဲတိုင်းနိုင်နေတယ်။ ဆရာမက နောက်ကကြည့်ပြီး တေးမွန် နင်က ပရိုဂရမ်အတန်းတက်ရမှာ တဲ့။ အဲဒါက ဒီလိုဂိမ်းတွေရေးတာမျိုးကို သင်ပေးတာတဲ့။ C programming တန်းတက်တဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုဂိမ်းတွေလုပ်တာသင်ပေးတာဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့။ ဆရာမက ကျွန်တော်ကိုတော်တော်ချစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ဆရာကို လိုက်ပြောပေးတယ်။ စိတ်ဝင်တစား လာကြည့်တယ်။ အားပေးတယ်။ လမ်းမှာတွေ့ ရင်မမြင်ရင်တောင် လမ်းခေါ်ပြီးနှတ်ဆက်တယ်။ ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ ဆရာ ၊ ဆရာမတွေအနည်းငယ်ထဲမှာ အဲဒီဆရာမလေးလည်းပါတယ်။ စိတ်မကောင်းတာက ဆရာမလေးရဲ့ နာမည်တောင် ကျွန်တော်မမေးခဲ့ရဘူး။ အဲဒီဆရာမလေးကြောင့် ကျွန်တော်လည်း C Programming ကို ကြိုက်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန် ကွန်ပြုတာတက္ကသိုလ်ကို လျှောက်ပြီးနေပြီ။ နောက် ကျွန်တော်တို့ မြို့ ကိုရုတ်တရက်ပြန်သွားတော့ ဆရာမနဲ့ လေးထပ်မတွေ့ ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြန်တွေးမိတိုင်း အဲဒီဆရာမလေးကို လေးစားတာရော၊ ကျေးဇူးတင်တာရောနဲ့ သတိရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကွန်ပြုတာတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ ကာလတစ်လျှောက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရန်သူမျိုး တစ်ပါးကြောင့် အိမ်ကစီးပွားကျနေတော့ ကွန်ပြုတာတောင် ၀ယ်ဖို့ မတောင်းဆိုချင်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့စိတ်လေလေနဲ့ သီအိုရီတွေကြည့်ထိုင်ဖတ်၊ နောက်တော့ ကျောင်းကလည်းမကောင်းတော့ စာလည်း စိတ်မ၀င်စား။ အတန်းလည်းမတက်။ တက်လည်း မသင်တဲ့ အချိန်ကမသင်နဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမလေးကျေးဇူးအရှိန်နဲ့C အကြောင်း၊ Database အကြောင်း၊ Software Engineering အကြောင်း၊ Operating System (OS) အကြောင်းတို့ ဆိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်တယ်။ နားထောင်တယ်။ ကျန်တဲ့ Business တို့ ၊ Accounting တို့ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ ဆို သိကိုမသိခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့၎ နှစ်တက်ပြီးတော့ဘွဲရလာခဲ့တယ်။ ကွန်ပြုတာနဲ့ ငါနဲ့ တော့ ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလို့တွေးပြီး စီးပွားရေးလုပ်မဟဲ့လို့ ကြံတော့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကလည်း မဖြစ်တော့ ဂုဏ်ထူးတန်းလေးတက်ပြီး ကျောင်းမှာသွားသွားအိပ်နေတာပေ့ါ။ အခန့်မသင့်ရင် ကျောင်းကမာန်ကြီးတဲ့ (တကယ်တော့ မာန်တက်တဲ့လို့ ပြောချင်တာ) ဆရာမတွေနဲ့ တောင် မကျေမလည် ဖြစ်လိုက်သေး။ (ကိုယ်ကလည်း ငယ်မာန်တက်နေခဲ့တာကိုး)။ ဒါပေ့မယ့် ဒီမှာလည်းကျွန်တော် ကံကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူအသိကနေတဆင့် အပြော့ထည် (software) တွေရေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ လုပ်မလားဆိုတော့ ချင်ခြင်းပဲအထုတ်ဆွဲပြီး ရန်ကုန်ဆင်းလာလိုက်တာ ပလုံဂွမ်ဆရာဘ၀စတော့တာပဲ။
ရန်ကုန်မဆင်းခင် အင်တာဗျူးက မန္တလေးကို ဖုန်းကနေတဆင့် ဗျူးတယ်။
HTML သိလား ၊( မသိဘူးအကို။ )
Web page ရောသိလား ( မသိဘူးအကို)
C# ကော။ (ကြားဖူးတယ် ၊ C တော့ သိတယ်အကို။)
.Net (dot Net) ကောသိလား။ (မသိဘူးဗျ)
XML ရော ကြားဖူးလား။ (မကြားဖူးဘူး)
အေးအေး၊ မင်းဘယ်နေ့ လာနိုင်မလဲ။ နောက်တပတ်လောက်ဆင်းခဲ့လေ။ ဒီကြားထဲ HTML တို့ C#တို့လေ့လာထားပေါ့။ အကိုတို့ က အဲဒါတွေနဲ့ လုပ်ကြတာ။
ဟား..ဟား။ ဒီလိုနဲ့ အလုပ်ရခဲ့တာ။ ရယ်ရတာရှိသေးတယ်။ ပြောပေးတဲ့သူက အဲဒီအကို ကို ဘာပြောထားလည်းဆိုတော့ မန္တလေးမှာ သူအရမ်းတော်တဲ့လူကိုတွေ့ ခဲ့တယ်။ (သဘောကတော့ တကယ့် တောထဲကနေ ထွန်းပေါက်မယ့်သူကို သေချာရှာတွေ့ ထားသလိုမျိုး အဲလိုပြောထားတာ။ ဟား..ဟား။) အဲဒီ အကိုကကျွန်တော် သိပ်လေးစားတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူဆီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့တလျှောက် သေချာသင်ပေးတယ်။ ကွန်ပြုတာပရိုဂရမ်ဘာသာရပ်တင်မကဘူး၊ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပါ ပြောဆိုသင်ပေးခဲ့တယ်။ တကယ်ကို ကျေးဇူးကြီးခဲ့တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်။ အခုတော့ သူလည်းဒီမှာ။ အခုအချိန်အထိ ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် ညီ မင်း စာဆက်ဖတ်ဖြစ်သေးလား။ သေချာလုပ်။ အေး ဒီဇိုင်း ပုံစံ (Design Pattern) မတက်ပဲ ရှေ့့ ဆက်လျှောက်ဖို့ မလွယ်ဘူး စသည်ဖြင့် ပြောဆိုအားပေးတုန်း။ (ဆရာတွေထဲမှာ တယောသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာရယ်၊ ဒီဆရာရယ်ကို တော်တော်သဘောကျတာ)။
ရန်ကုန်ရောက်တော့ ညမအိပ် နေ့ မအိပ် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာတွေ။ ကံကောင်းပြန်တယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ Top Boys ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီက နာမည်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ပညာကိုတအားဦးစားပေးတယ်။ အဲဒီကလူတွေကလည်း စိတ်ရော ၊ လူရော တော်တော်ကောင်းကြတယ်။ အဲဒီမှာ ၁ နှစ်ကျော်လောက် လုပ်လိုက်ရတယ်။ စလုံးထွက်ဖို့စိတ်ကူးမိတယ်။ နောက်တော့ ဒီရောက်လာတာပေါ့။ အလုပ်ရမယ်လို့မသိနိုင်ပဲနဲ့ခပ်တည်တည် ထွက်လာတာ။ အတွေ့ အကြုံတောင် သိပ်မရှိသေးဘူး။ (ဒါပေမယ့် ကျောင်းတုန်းကပြောသလို ပြောရရင် "ခပ်တည်တည်". . .ဟဲ..ဟဲ)။
ပလုံဂွမ်ဆရာလို့ သာခေါ်သာ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်လုပ်နေရတဲ့ ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကလွဲရင် ကျန်တာတွေသိပ်မသိဘူး။ မသိဆို တော်တော်မသိတာပါ။ Face Book၊ FriendSter၊ Forums၊ Chat Room ဘာဆိုဘာမှမသိခဲ့တာပါ။ အခုထိလည်း စိတ်မ၀င်စားဘူး။ internet ကိုလျှောက်လည်ရင် သတင်းနဲ့ကိုယ်ရှာချင်တာရှာနေတာနဲ့ပြီးသွားခဲ့တာ။ အခုတော့ ဘလောဖတ်တာလည်းပါလာတယ်ပေါ့။ ဘလောတောင် အင်ဂလုန်ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းမ စိုးကြည် ကောင်းမှုနဲ့ သိတာ။ HTML ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပေမယ့် ဘယ်လောက်တက်လည်းဆိုတာတော့ ကျွန်တော်ဘလောပဲ ကြည့်ပေါ့။ ပေစုတ်စုတ်ရယ်။ ဟီး။ ဂရပ်ဖစ် လုံးဝမသိဘူး။ တခါတလေ ဘလောပေါ်က ဆရာတွေ သူတို့ ဘလောလေးကို အလန်းလေး တွေဖြစ်နေအောင်လုပ်ကြတော့ အားကျပါတယ်။ နာမည်ကြီးတွေကိုလည်း အားကျပါတယ်။ ဟိုကောင်မလေးကလာပြီး အကူအညီတောင်းလိုက်၊ ဒီကောင်မလေးကလာပြီးနှတ်ဆက်လိုက်နဲ့ .. ဟိ.. အားပဲကျနိုင်တာပါ။
ဟိုတနေ့ ကကို ပန်ဒိုယာနဲ့ဂျစ်တူး ဘလောတွေမှာ Twitter ဆိုတာတွေ့တာနဲ့ဘာလဲလို့ပန်ဒိုယာကို မေးကြည့်မိပါတယ်။ IT သမားဖြစ်ပြီး မသိဘူးလားတဲ့။ အော် .. တော်တော်ဆိုးတဲ့ဘ၀။ ခွေးမှီးကုတ်သွားသလိုပဲ။ ခံစားလိုက်ရတာ ပြောပါတယ်။ ဂဂျစ်တွေ (Gadgets )၊ ရှိပြီးသား တန်းပလိတ်တွေ သုံးဖို့ လည်း မကြိုက်တော့ မလုပ်ဖြစ်။ ဒီလိုနဲ့ဘလောစုတ်စုတ်လေးမှာပဲ ရေးနေရတာပေါ့။
လမ်းမှာတွေ့ လို့ဘာလုပ်နေတာလည်းဆို ပရိုဂရမ်မာဆို လူတွေကလည်း အထင်ကြီးကြတယ်။ (မတော် ငါ့ကို သူတို့ စက်ပြင်ခိုင်းနေရင်ဒုက္ခလို့ ။ မပြင်ပေးချင်လို့ ထက် သိပ်ပြင်တက်တာမဟုတ်ဘူး။ အဲ ကိုယ်စက်ကိုယ်ဆိုရင်တော့ လာထားပဲ၊ သူများစက်ကျတော့ သတိထားရတယ်။) လခ ဘယ်လောက်ရလဲ။ "" လောက်ရတယ်ဆို ဟယ် တဲ့။ ပူလိုက်တဲ့မျက်နှာ။ တကယ်တော့ သူတို့ နဲ့ ယှဉ်ရင်သာ များနေတာ။ သိပ်များတယ်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်လခက မဖြစ်စလောက်ရယ်။ (မြန်မာကလာတဲ့ မြန်မာတွေ အတွက်တော့ အင်ဂျင်နီယာတွေထက် ကွန်ပြုတာသမားတွေက လစာပိုရကြတယ်။) အခုတော့ မရကြတော့ပါဘူး။ ၂၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်က အသေလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒါတောင် အခု ၁၈၀၀ လောက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ကျောင်းက အသိတစ်ယောက်တွေ့ တော့ ဘာလို့ လုပ်ရတာလည်းဆိုပြီး ပြောမိသေးတယ်။ အခုတော့ မရကြတော့ဘူး။ စီးပွာကျတာရော၊ မပြင်မဆင်ပဲ လိမ့်ဝင်လာတာရော။
ဒီစလုံးမှာလည် တကယ်တော့ လွယ်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ခက်လားဆိုလည်း အဲလိုလည်းမခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြသာနာရှိတယ်။ ကွန်ပြုတာပိုင်းထက် ဆက်ဆံရေးပိုင်းပါ။ ကုလားဖြူဘာသာရပ်က တခါတလေ ကွန်ပြုတာအသိထက် ပိုအရေးပါနေတက်တယ်။ အခု ကျွန်တော်က ဆက်ဆံရေးကြောင့် အလုပ်မှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်။
ဒါနဲ့သတိရလို့လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်က ကိုနတ္တိက အလုပ်ထဲက အကြောင်းတွေ ရေးရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပြုခဲ့ဘူးတယ်။ အဲတုန်းကတော့ ငြင်းခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အတွေ အကြုံသဘောမျိုးနဲ့ရေးဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆိုင်တာတွေ တော့ ရေးလိုမရဘူးပေါ့လေ။
တကယ်တော့ မလွယ်လိုက်တဲ့ ပလုံဂွမ်ဆရာဘ၀။
(ဟို Google တို့ ဘာတို့ က ဂုရုကြီးတွေတော့ မပါဘူးပေါ့လေ။)
ပန်ဒိုယာက IT သမားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကြောင့်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မင်းတို့ တော့ အဆင်ပြေနေပြီပေါ့လို့လှမ်းပြောတာကြောင့်
တခါတလေတော့လည်း Google တို့Microsoft တို့Mozilla တို့စသည်ဖြင့် အိမ်မက်တော့ မက်မိခဲ့ပါတယ်။ဟား..ဟား။ :P (အော် အိမ်မက်..အိမ်မက်)
(အခုတော့ မမက်တော့ပါဘူး။ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး။) :)
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://ahnai.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[Royal-Myanmar.com] 1 New Entry: ယောက်ျား တယောက်၏ ဆွဲဆောင်မူ
ယောက်ျား တယောက်၏ ဆွဲဆောင်မူ
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အပေါ် ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ဆွဲဆောင်မူက သူရဲ. ရုပ်ရည်ချောမော ပြေပျစ်မူပေါ်မှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နူန်း မမူတည်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေနဲ. တွေတဲ့ အချိန်မှာဘာတွေလုပ်ရမယ်၊ ပြောရမယ် ဆိုတာကို မသိခဲ့ရင်လဲ သင်ဟာ ဘယ်လောက် ချောမော ခန်.ငြားပါစေ မိန်းကလေး တွေ သင့်ကို မခုံမင်တက်ပါဘူး။ အများသောအားဖြင့်...
Visit www.royal-myanmar.com to read full post. (Sai Tun)
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://www.royal-myanmar.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[Welcome]2New Entries: မိတ်ဆွေဆိုလားပဲ
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://winzaw-mdy.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
▼ 2008 (3314)
▼ November (1205)
[ဒေါင်းမာန်ဟုန်] 1 New Entry: ဗမာပြည်မှ အာဇာနည်မျာ...
[ညီနေမင်း] 1 New Entry: mobile ကနေ ကွန်ပျူတာကို fr...
[ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ]2New Entries: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်...
[မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း] 1 New Entry: ငှက်ကလေး ခရီး...
[ဟင်းလင်းပြင်] 1 New Entry: ဒီနေ့စီးပွားရေးအကြပ်အတ...
[တောကျောင်းဆရာရဲ့ တစ်ခါက တစ်ချို့တလေ] 1 New Entry:...
[Royal-Myanmar.com] 1 New Entry: ယောက်ျား တယောက်၏ ...
[လေနုအေး] 1 New Entry: အလေ့ကျ
[မိုးဦးဝေလွင်] 1 New Entry: လေဟုန်ပျံကဲ့ ငှက်ငယ်...
[BAGANLAND] 1 New Entry: Bid to move $36m suit to ...
[meelayzar] 1 New Entry: ပဟေဋ္ဌိ
[We She Me] 1 New Entry: နိုင်ငံခြားကို အထင်မကြီးသ...
[ဓမ္မ] 1 New Entry: ဒီနေ့စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းနဲ့ အေ...
[နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။] 1 New Entry: သေချ...
[Fine Leaves] 1 New Entry: သံချို
[Laminkhin] 1 New Entry:ီDAB ဖွဲ့ စည်းခြင်းနှစ်(...
[May Nyane] 1 New Entry: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၁၇)
[ဒေါင်းမာန်ဟုန်] 1 New Entry: သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင...
[My TLMS]3New Entries: chitpone invites you to ...
[မေမိုးမခ]2New Entries:
[MONYWA INFO CITY]2New Entries: မုံရွာ ကွန်ပျူတာ...
[We Fight We Win. -- " More than Media "]3New ...
[Maya Magazine]2New Entries: နာရီပြင်ဆရာ၏အိမ်နီး...
[Moehmaung] 1 New Entry: ချစ်သူသို့
[ပန်ဒိုရာ] 1 New Entry: X'mas အကြို ပုံရိပ်များ
[Padauk Myay] 1 New Entry:
[Nine Nine SaNay] 1 New Entry: အမေရိကား၏ ရှင်သန်ခြ...
[ဒီရေ]2New Entries: လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံမှ အထည်ချုပ...
[:: My Little World ::] 1 New Entry: Hot N Cold
[တောင်ငူသား] 1 New Entry: ဘယ်သူပြောရဲလဲ
[My Burmese Blog] 1 New Entry: Country Code Of The...
[MYANMAR POLITICAL NEWS AND IDEAS] 1 New Entry: LE...
[ဂျစ်တူးဆိုသူ၏ အပိုင်းအစများ] 1 New Entry: အပေးအယူ...
[ဆုံဆည်းရာ]5New Entries: နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူမျာ...
[ဆောင်း]2New Entries: အင်္ဂလန် နှင့် ကျွန်မ - ၈ (2...
[အောင်မြေ] 1 New Entry: သာသနာတော်ကွယ်ပျောက်ပုံ ကွယ...
[ဆိုးသွမ်း] 1 New Entry: စိတ်ရှည်ပါ......
[Road to Freedom] 1 New Entry: ကျနော့်ရဲ့အလိုက်ကမ်...
[ချင်းမလေး] 1 New Entry: Vegetable Art တဲ့ 
 1 New Entry: အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင်
[ကပ်ပါပေ့ ပီကေရယ်] 1 New Entry: အရှေ့သို့လားသော် (...